ကြောက်မက်ဘွယ်သောစျယောကျစီ | ပညာရေး | ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
ကြောက်မက်ဘွယ်သောစျယောကျစီ | ပညာရေး
ကြောက်မက်ဘွယ်သောစျယောကျစီအတွက်2ထံမှစတင်သည်။ နှစ်နှင့်4သည်အထိပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသိသာနိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်အပေါ်ဆွဲ။ အဆိုပါအသေးစားအကြီးအကဲများဖြစ်စေဆွဲထုတ်ကျောသို့မဟုတ်ဆူညံအော်ဟစ်ခြင်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်ပြေးနေသော်လည်း။ မကောင်းတဲ့အချိန်လေးခုနှစ်တွင်လည်းမိသားစုဝင်များနှင့်မိတ်ဆွေများဆန့်ကျင်ကန်ဘောများနှင့်လာကြတယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
ကြောက်မက်ဘွယ်သောစျယောကျစီ - မိဘများအားဖြင့်ကိုကွောကျရှံ့
မိဘများအတွက်, သူတို့ကမကြာခဏဘယ်လိုတုံ့ပြန်မဆိုလွယ်ကူသောအချိန်မသိရပါဘူး။ အကြောင်းမူကား, အဆင့်ဖူးအငုံထွက်အတွက် nipped ရမည်ဖြစ်သည်နှင့်ကလေးများဤအချိန်တွင်တစ်ဦးအားကြီးသောလက်လိုအပျကွောငျးဟောင်းအယူအဆ, တင်းကြပ်စွာပညာရေးဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်ပယ်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လူမှုရေးရှုထောင့်ကနေပညာရေးဆိုင်ရာ Trotzphase သူငယ်ရှာတွေ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
အဆိုပါဝုန်းဒိုင်းကြဲဇာတ်ကောင်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားထွက်လဲကလေး၏နယ်နိမိတ်စူးစမ်းနှင့်သူ၏စိတ်ကိုမပြောတတ်ကူညီပေးသည်။ သငျသညျကိုသူတို့မကြားလိုရန်နှင့်အလေးအနက်ထားခြင်းကိုခံရနိုင်ရန်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခံရဖို့ရှိသည်ဘယ်လိုသင်ယူကြသည်။
ကလေးသူငယ်အခနှစ်ကောင်လျှင်ဘာမှပြဋ္ဌာန်းရန်မှ defies, သို့သော်ဤအတည်ပြုမဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်မိဘဆန္ဒရှိသည်မဟုတ်, ထို့နောက်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်: အဆိုပါကလေးသည် romp နှင့်အေးဆေးစောင့်ရှောက်ချန်ထားပါ။
မူလစာမျက်နှာမဟုတ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာရုံလေးပါးရိုးကိုပြင်ပမှာ, ဒီမကြာခဏရှက်စရာအချိုးအစားယူနိုင်ပါတယ်။ mom, နှင့်အဖေအခြေအနေကရေပိုင်နက်ပြဿနာဖြေရှင်းရန်မှလျင်မြန်စွာတခါပေးကတည်းက။ မိဘမြားစှာအချိန်လေး၏ကြားမှယုတ္တိဆင်ခြေ၏ကလေးသည်လက်လှမ်းမဟုတျပါဘူးအဖြစ်ကံမကောင်း, အသီးမသီးသည့်ဆွေးနွေးမှုများ, ကြိုးစားပါ။
ဤအတစ်ဆိုးစက်ဝိုင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏသူတို့၏လမ်းရချင်မှသူငယ်စေသည်အဖြစ်, စိတျဓာတျလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိဘများ, အသက်ပြင်းပြင်းရှူယူတောင်မှအေးဆေးနေဖို့ရန်နှင့်သူငယ်ကိုအာရုံသို့မဟုတ်တခါတရံတွင်ပတ်ပတ်လည်ပြေးကြကုန်အံ့မှမေတ္တာရှင်ပေမယ့်နည်းနည်းရှေးခယျြမှုနှင့်အတူထွက်ခွာနေကြသည်။ အဘယ်သူမျှမအခြေအနေမျိုးမှာမိဘများဖီဆန်နှင့်အတူပင်တုံ့ပြန်သင့်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသိမ်းထား | သားသမီးများ၏ပညာရေး
သားသမီးရဲ့စာအုပ်များ - အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသောဖတ်နေသလဲ? | ပညာရေး
|, ကိုကူညီပါငါ့ကလေးလဲလျောင်းနေသည် ပညာရေး
မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အပျိုဖော်ဝင် | ပညာရေး
မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကာလအတွင်းမှန်ကန်သောအပြုအမူ | ပညာရေး
မွန်တက်ဆိုရီကျောင်းများ | ကျောင်းကကြီးပြင်းလာ
Waldorf ကျောင်းများ | ကျောင်းကကြီးပြင်းလာ
သားသမီးများ၏ဗီရိုထဲမှာအမိန့် | ပညာရေး
မိန့်ခွန်းများပိုကြီးဒြေများအတွက်ဇာတ်လမ်းတွေကို | သားသမီးရဲ့စာအုပ်များ ...
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု - ကာကွယ်ရေးနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ | ပညာရေး